तपाईको हाँस्ने शैलीबाटै झल्किन्छ तपाईको व्यक्तित्व ! - Nepal Japan
नेपाली समय : 05:16:32
जापानी समय : 08:31:32
तपाईको हाँस्ने शैलीबाटै झल्किन्छ तपाईको व्यक्तित्व !
14 June, 2019 17:18 |बिचित्र | comments | 31500 Views
सामुद्रिक शास्त्रका माध्यमले हामीले जोकोहीको पनि व्यक्तित्व पनि विश्लेषण गर्न सक्छौं । मान्छेको हाँस्ने शैलीबाट पनि उसको व्यक्तित्वका बारेमा थाहा लाग्छ ।
मजाले गलल्ल हाँस्ने मानिस सहृदयी, सहनशील, दयालु र सबैको भलो चाहने खालको हुन्छ । यस्तो मानिसमाथि विश्वास गर्न सकिन्छ । भगवानको भक्तिमा मन लाग्छ यस्तो मानिसलाई । यस्ता मान्छेले सबैलाई खुशी राख्छन् । प्रेमजीवनमा पनि यिनीहरू इमान्दार हुन्छन् ।
चर्को स्वरमा हा हा गर्दै हाँस्ने मानिस उच्च स्थानमा पुग्नका लागि सदैव प्रयत्नशील हुन्छन् । उनीहरूको हाँसोमा अहंकार पनि झल्किन्छ । उनीहरू अर्काको कुरा काट्दैनन् । यिनीहरूको अहंकारमा कसैले चोट पु–यायो भने चाहिँ यिनीहरूले त्यसलाई बाँकी राख्दैनन् । यस्ता मानिस समाजमा लोकप्रिय हुन्छन् । मान्छेलाई प्रयोग गर्ने कलामा यिनीहरू निपूण हुन्छन् ।
रोकिई रोकिई हाँस्ने मानिसहरू आफ्नो काममा चतुरा हुन्छन् । यस्ता मान्छेको दिमागमा केही न केही कुरा घुमिरहेको हुन्छ । यिनीहरू अर्काको कुरा बुझेर त्यसै अनुसारको व्यवहार गर्छन् । यिनीहरू सन्तुलित हुन्छन् तर यिनीहरूमा केटौलोपना देखिन्छ ।
शान्त मुस्कान हुनेहरू मनको प्रसन्नता अभिव्यक्त गर्न हिचकिचाउँदैनन् । यस्ता मानिस गम्भीर, धैर्यवान्, शान्त, विश्वासी र चरित्रवान् हुन्छन् । आफ्ना कुरालाई थोरै शब्दमा व्यक्त गर्न सक्छन् यिनीहरूले । सबैका साथ सामान्य व्यवहार गर्छन् । शान्त स्वभावका साथ सबैलाई आफूतिर आकर्षित गर्छन् ।
घोडाले हिनहिनाएको जस्तो गरी हाँस्ने मानिसहरू फटाहा, धूर्त, अहंकारी र चरित्रहीन हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यिनीहरू जे पनि गर्छन् । स्वार्थ पूरा भएपछि यिनीहरू व्यक्तिलाई बिर्सिदिन्छन् र अझ कुरा पनि काटिदिन्छन् । यस्ता मानिसबाट टाढा हुनु बेश ।
सबैसँग मिलेर हाँस्ने र सानो सानो कुरामा पनि अकारण हाँस्ने मानिस मिलनसार हुन्छन् तर त्यत्तिकै स्वार्थी पनि हुन्छन् । यिनीहरूलाई बुझ्न अलि गाह्रै हुन्छ । कसैलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ साँध्न यिनीहरू माहिर हुन्छन् । यिनीहरूको दिमागमा जतिखेर पनि स्वार्थपूर्तिका कुरा घुमिरहेका हुन्छन् ।
हाँस्दाखेरी गालामा डिम्पल बन्ने मानिसहरू सबैसँग छिट्टै घुलमिल गर्छन्, आत्मविश्वासी हुन्छन्, मिलनसार र रोमान्टिक हुन्छन् । गालामा डिम्पल पर्ने युवतीहरू प्रेमी फेर्दै हिँड्ने खालका हुन्छन् । यिनीहरू संवेदनशीलका साथसाथै जिद्दी पनि हुन्छन् ।
२२१ केटासँग प्रेम टुटेपछि कुकुरसँग विवाह गर्ने मोडल !
सारा खानको कपडाले पाकिस्तानमा हंगामा !
हेर्नुहोस विश्वको सबैभन्दा खतरनाक स्वीमिङ पुल !
पर्यटन व्यवसायी शेर्पाले बनाइदिए व्यक्तिगत लगानीमा दुईवटा पुल
गोंगवुमा नक्कली सुन सहित एकजना पक्राउ
नेपालीको मोटरबोटमा भेटियो शव : प्रहरीद्वारा मालिकसंग सोधपुछ
यू-१८ साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोलीेको घोषणा
जापानबाट किरणविक्रम थापाद्वारा एनआरएनए आईसीसी उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा
“सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने हामी सधैं यसैमा मस्त !”
एएफसी यू–१६ च्याम्पियनसिप : नेपाल र कुवेतले १-१ को बराबरी खेले
लमजुङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प
लुक्‍लाबाट अलपत्र यात्रु लिएर फर्केका चार हेलिकोप्टर काभ्रेमा आकस्मिक अवतरण
नेपालमा पुस्तकालय बनाउन अमेरिकामा गाला डिनर
जहाज डुबाएर २० लाख पर्यटक ?
एनआरएनए युरोप क्षेत्रको संयोजकमा बेल्जियमबाट गङ्गाधर गौतमको उम्मेदवारी
सरकारको अंकुशमा संवैधानिक अंग